Bathembisa lukhulu abagadli beChiefs - Ilanga News
Home Ezemidlalo Bathembisa lukhulu abagadli beChiefs
Ababuya ekulimaleni bavivela oweNedbank Cup
BATHEMBISA into yamehlo abagadli beKaizer Chiefs abake bahlala isikhathi eside bengabonakali ensimini ngenxa yokulimala. IChiefs izobhekana neTS Galaxy kowelast 32 weNedbank Cup ngoMgqibelo ngo-18h00 eFNB Stadium, eSoweto. ULeonardo Castro noSamir Nurkovic (abasesithombeni) bake bangabonakala kule kilabhu ngenxa yokuhlushwa wukulimala. Nokho kungenzeka babonakale kulo mdlalo weGalaxy njengoba bengumqemane. Laba bagadli bekhuluma nabezindaba bathembise into yamehlo njengoba ezabo ziya kulo mdlalo weNedbank.
UCastro uthe: “Ngizizwa ngisesimweni esihle manje, leli khefu lisisize kakhulu thina badlali abebelimele ukuze sibuyele kahle esimweni. “Leli khefu lifike ngesikhathi esikahle impela ukuze umuntu azigcine eqatha.
“Ngizizwa ngisesimweni esihle kakhulu ukubhekana nemidlalo ezayo.”Nginethemba lokuthi emdlalweni wethu ozayo ngizojabula futhi ngija bulise nabalandeli. Ngifuna nokutshengisa ukuthi ngisakulambele ukudlala nokunqobela iChiefs imidlalo,’’ kusho uCastro. Uthi lo mdlalo akufanele nangengozi bawuthathe kancane. “INedbank Cup ngumqhudelwano obalulekile kithina. “Empeleni yonke imiqhudelwano siyayihlonipha. “Kuzofanele siqale ngempelasonto sitshengise ukuthi siwudinga kangakanani lo mqhudelwano. “Kuzofanele siye ngamandla kulo mdlalo ukuze sidlulele emzuliswaneni olandelayo.
“Baneqembu elihle futhi siyazi ukuthi noma iyiphi ikilabhu kwiPSL uma izodlala neChiefs iyalikhuphula izinga. “Kodwake siyazi lapho esibheke khona, kuzofanele sisebenze kanzima ukuze sifinyelele khona,’’ kusho uCastro. UNurkovic uthi kuyamjabulisa ukushaya ibuya njengoba bese kunesikhathi eside egcine ukubonakala ensimini ngenxa yokulimala. “Ngiyajabula ukuthi ekugcineni sengize ngabuya ukuzolwa nozakwethu. Sisebenze kanzima ukulungiselela lo mdlalo weNedbank Cup. Ngingasho ngingananazi ukuthi siwulungele futhi abantu bazobona ibhola eliseqophelweni eliphezulu.
“Ngisasebenza kanzima ukuze ngibuyele esimweni sami sakudala. “Kungekudala ngizobe sengisesimweni engaziwa ngaso. “Bekunzima ukubukela yonke le midlalo eyedlule ngingaphandle ngiyigqolozele kwi tv. “Ngikulangazelele ukubuyela ensimini, kodwa okuyongijabulisa kakhulu wukubona nabalandeli bethu bebuyela enkundleni. “Bonke abantu bangazi ngoKokota Piano kusukela ngosuku lwami lokuqala ngifika, ngijahe kabi ukuphinde ngibajabulise futhi abalandeli bethu,’’ kusho uNurkovic.
Previous articleUsizi kowondliswe indodana (18) ‘eyebiwa wumkakhe’
Next articleKutholwe izidumbu zabashadikazi ziboshiwe endlini